ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုး သည် ကူးစက်ခံထားရသူ စကားပြောနေရင်း ၊ အသက်ရှူနေရင်း မှ တဆင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များတွေ့ရှိ – Na Pann San
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုး သည် ကူးစက်ခံထားရသူ စကားပြောနေရင်း ၊ အသက်ရှူနေရင်း မှ တဆင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များတွေ့ရှိ
Na Pann San W | April 3, 2020 | International News | No Comments
Friday , April 03 , 2020.
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိသူ တစ်ယောက် ဟာ နှာချေ၊ချောင်း ဆိုးလိုက်ရုံနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ ပျံ့နှံ့စေတာမဟုတ်ဘဲ၊ စကားပြောနေရင်း (ဒါမှမဟုတ်) ပုံမှန် အသက်ရှူနေရင်းနဲ့ ကို လေထဲ ပျံ့နှံ့စေနိုင်တယ် လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ က အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ထံ စာရေးသားပေး ပို့ခဲ့ကြောင်း အခုလ (၂) ရက် CNN သတင်းမှာ ဖော်ပြထား ပါ တယ်။
အမေရိကန် အမျိုးသားသိပ္ပံ အကယ်ဒမီ မှ ကော်မတီ တစ်ခု ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Harvey Fineberg ရဲ့ အိမ်ဖြူတော်ထံ ရေးသားပေးပို့ တဲ့ စာထဲမှာ အခုလိုဖော်ပြထား တာပါ ။
ဒီတွေ့ရှိချက်ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို ဟန့်တားဖို့ Mask ဝယ်ယူအသုံးပြုတာတွေ များလာနိုင်တယ် လို့ အိမ်ဖြူတော် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တားဆီးရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ Anthony Fauci က CNN သတင်းဌာန ကို ပြောပါတယ် ။
အမေရိကန်ရောဂါဘယ ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ကာကွယ်တားဆီးရေးဌာန (CDC) ကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခြောက်ပေအတွင်းမှာ ရှိတဲ့အခါ ရောဂါပိုးရှိသူက နှာချေ ၊ ချောင်းဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် အခြားသူတွေ ကို ကူးစက်စေနိုင်တယ် လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြား ထားပါတယ် ။
(CDC) ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ လက်တွေ့လေ့လာချက်တွေ အရတော့ ရောဂါပိုးရှိသူဟာ စကားပြောနေရင်း ( ဒါမှမဟုတ် ) ပုံမှန် အသက် ရှူနေရင်းနဲ့ကို လေထဲကို ပိုးတွေပျံ့သွားနိုင်ခြေ ရှိတယ်လို့ ဒေါက်တာ Fineberg က CNN သတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။ ။
ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈပိုး ရှိသူ တဈယောကျ ဟာ နှာခြေ၊ခြောငျး ဆိုးလိုကျရုံနဲ့ ဗိုငျးရပျဈပိုးတှေ ပြံ့နှံ့စတောမဟုတျဘဲ၊ စကားပွောနရေငျး (ဒါမှမဟုတျ) ပုံမှနျ အသကျရှူနရေငျးနဲ့ ကို လထေဲ ပြံ့နှံ့စနေိုငျတယျ လို့ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ က အမရေိကနျ သမ်မတ အိမျဖွူတျောထံ စာရေးသားပေး ပို့ခဲ့ကွောငျး အခုလ (၂) ရကျ CNN သတငျးမှာ ဖျောပွထား ပါ တယျ။
အမရေိကနျ အမြိုးသားသိပ်ပံ အကယျဒမီ မှ ကျောမတီ တဈခု ရဲ့ ဥက်ကဌဖွဈသူ ဒေါကျတာ Harvey Fineberg ရဲ့ အိမျဖွူတျောထံ ရေးသားပေးပို့ တဲ့ စာထဲမှာ အခုလိုဖျောပွထား တာပါ ။
ဒီတှရှေိ့ခကျြကွောငျ့ အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှုကို ဟနျ့တားဖို့ Mask ဝယျယူအသုံးပွုတာတှေ မြားလာနိုငျတယျ လို့ အိမျဖွူတျော ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ တားဆီးရေးအဖှဲ့ဝငျ ဒေါကျတာ Anthony Fauci က CNN သတငျးဌာန ကို ပွောပါတယျ ။
အမရေိကနျရောဂါဘယ ထိနျးခြုပျရေးနဲ့ ကာကှယျတားဆီးရေးဌာန (CDC) ကလညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈဟာ လူတဈဦးနဲ့တဈဦး ခွောကျပအေတှငျးမှာ ရှိတဲ့အခါ ရောဂါပိုးရှိသူက နှာခြေ ၊ ခြောငျးဆိုးလိုကျမယျဆိုရငျ အခွားသူတှေ ကို ကူးစကျစနေိုငျတယျ လို့ ထုတျဖျောပွောကွား ထားပါတယျ ။
(CDC) ရဲ့ထုတျပွနျခကျြဟာ မှနျကနျကွောငျး၊ လကျတှလေ့လေ့ာခကျြတှေ အရတော့ ရောဂါပိုးရှိသူဟာ စကားပွောနရေငျး ( ဒါမှမဟုတျ ) ပုံမှနျ အသကျ ရှူနရေငျးနဲ့ကို လထေဲကို ပိုးတှပြေံ့သှားနိုငျခွေ ရှိတယျလို့ ဒေါကျတာ Fineberg က CNN သတငျးဌာနကို ပွောပါတယျ။ ။
အင်ဒိုနီးရှား ဘာလီကျွန်းမှာ COVID-19 နဲ့ ပထမဆုံး သေဆုံးသူရှိလာ….
မြန်မာအမျိုးသမီးသိပ္ပံပညာရှင် ဒေါ်မိမိအောင် ဦးစီးလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ် မှာ ပျံသန်းမယ့် ဟယ်လီကော်ပတာ